नउघ्रिएका पाटाहरु - Damauli Khabar
Damauli Khabar4 weeks ago
मानिसहरु आफ्नो काम सकिएपछि हिजोको कुरा बिर्सौं भन्छन् । तर विगत भनेको अनुभव हो, शिक्षा हो, भविष्यको मार्ग दर्शन हो । यसलाई बिर्सिएर वर्तमानमा सफल हुन सकिँदैन । त्यसले भनिन्छ, इतिहास मेट्नु र लुकाउनु हँुदैन । अर्काको इतिहास मेट्नु खोज्दा आफ्नो पनि मेटिन्छ । वर्तमानप्रति ईमानदार नहुनेको भविष्य पीडादायक हुन्छ । एक दिन म कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रशारित गिरिजाबाबुको आत्मवृत्तान्त हेर्दै थिएँ । मेरो ध्यान दुनै काण्ड (माओवादी आक्रमण) माथिको उहाँको अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भयो । उहाँ ‘सुरक्षा निकायले सहयोग नगरेकाले दुनै काण्डपछि गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएको हुँ, भन्दै हुनुहुन्थो । उहाँले किन साँचो कुरा नबोल्नुभएको होला ? लाग्यो मैले पर्छ ।
डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा भएको माओवादी आक्रमण प्रजातन्त्र विरुद्धको सुनियोजित षड्यन्त्र थियो । मङ्सिर २०६५ मा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएपछि विस्थापित कार्यकर्ताहरुलाई त्यो साल दशैैँसम्ममा घर फर्काउने भनी उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान र जाजरकोटको स्थलगत निरीक्षण गरेँ र एउटा योजना पनि बनाइयो । दशैँ अघि ९ असोज २०५७ मा डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा माओवादीले आक्रमण गरे । सदरमुकाम कब्जा गर्न सकेनन्, ब्याङ्कबाट तीन करोड रुपैयाँ लुटे । माओवादी आक्रमणको भोेलिपल्टै तत्कालिन राजा वीरेन्द्र त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम बनेछ । तर उनलाई त्यसतर्फ जान नदिई म आफैँ गएँ । माओवादीले सदरमुकाम आक्रमण गरेको भोलिपल्टै राजा किन डोल्पा जान चाहन्थे ? त्यो खोजीको अर्को विषय हुनेछ ।
डोल्पाबाट फर्केपछि माओवादी प्रभावित ६ जिल्लामा प्रहरी अपरेशन गर्ने निकार्य मन्त्रीपरिषद्ले गर्याे । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय राजाकहाँ जान्थे । तत्कालीन राजा माओवादीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा थिएनन् । माओवादीहरुले पनि राजा मातहतको सेनालाई छोएका थिएनन् । उनीहरु आफ्नो प्रमुख दुश्मन प्रहरीलाई ठान्थे । सशस्त्र प्रहरीसँग त उनीहरु डराएका पनि थिए । माओवादी विरुद्ध परिचालन गर्नकै लागि गठन गरिको सशस्त्र प्रहरीले सबैको सहयोग पाएको भए माओवादीले आजको सफलता पाउने थिएन । तर, यही अपरेशनको कुरा गर्न जाँदा राजाले गिरिजाबाबुलाई भनेछन्, “प्रहरीले माओवादी विरुद्ध लड्न सक्दैन । सेना प्रयोग गर्ने हो भने गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र गृहसचिवलाई निकाल्नुपर्छ ।”
गिरिजाबाबुले राजीनामा माग्नुभयो भने गृहसचिव पद्म पोखरेललाई अन्यत्र सुरुवा गर्नुभयो । मैले राजीनामा दिनुअघि गिरिजाबाबुलाई भनेको थिएँ, “तपाईको यो निर्णय गलत हो । यसले तपाई, कांग्रेस र सिंगोे देश, कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।” उहाँले मलाई पुनः दशैँपछि गृहमन्त्रीमा ल्याउँछु भनेर फकाउनुभयो । विश्वमा कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीलाई बलिवेदीमा चढाएर आफ्नो पद थाम्न सक्दैन । मैले भनेँ, “मेरो राजीनामाले तपाईको पदावधि ६ महिना थपिएला, धेरै समय जाँदैन ।” नभन्दै त्यस्तै भयो । २६ असार २०५८ को होलेरी काण्डमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको असहयोगका कारण उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र त्यसपछिको पछिल्लो ‘शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन जनातालाई शक्तिसम्पन्न बनाउन र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाका लागि होइन । कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले यो नबुझ्दासम्म नेपालको राजनीति अन्योलमा रहिरहन्छ । दुनै काण्डपछि माओवादी विरुद्ध सेनाको सहयोग पाइन्छ भन्ने विश्वासमा रहनुभएका गिरिजाबाबुलाई होलेरी काण्डको असफलताले माओवादीसँगको वार्ताका लागि अघि बढायो । उहाँ स्वयंले दिल्लीमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो । वि.सं. २०५७ को अन्त्यतिर सम्पन्न वार्ताका कुराहरु काठमाडौँमा गोप्य र सुरक्षित तरिकाले छलफल गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो र भयो पनि । शीर्ष तहमा भएको वार्ताको निष्कर्षकै आधारमा अर्को औपचारिक वार्ता ६-७ जेठ २०५८ मा दिल्लीमा भएको थियो । जसमा म स्वयं र डा. शेखर कोइराला सहभागी भयौँ । लगातार दुई दिन, १२-१२ घण्टासम्म हाम्रो टोली र डा.बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङबीच छलफल भयो ।
‘संसद्को अधीनमा सेना राख्ने’, ‘कार्यकारी अधिकारी सम्पूर्ण रुपले मन्त्रिपरिषद्मा रहने’ र ‘संविधानका अन्य धाराहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार संशोधन हुने भए २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्दा माओवादीलाई मान्य हुने’ सहमतिका साथ हामी काठमाडौँ फर्कियौं । यी सहमति लागू गर्न तत्कालीन देउवा सरकार बाधक नहुनेमा पनि हामी सहमत थियौँ । तर हाम्रो वार्ता अघि नै गिरिजाबाबुले ‘म समस्याको निकाश निकाल्छु’ भन्दै माओवादीहरुसँग आफूले गरेको भेटघाट बारेमा तत्कालीन राजालाई भनिसक्नुभएको रहेछ । राजा कुनै पनि हालतमा कांग्र्रेसको हातबाट माओवादी समस्या समाधान नहोस् भन्ने चाहन्थे । राजाको दृष्टिमा माओवादी आन्दोलन कांग्रेस समाप्तिका लागि हो भन्ने थियो । उनलाई त्यसको जानकारी दिनु गलत रणनीति थियो गिरिजाबाबुको । परिणामतः हामी दिल्लीबाट फर्केकै दिन देउवाले संसद् विघटन गरे । त्यही कारण कांग्रेस पनि फुट्यो । हाम्रो प्रयास पनि असफल भयो ।
यहाँ अर्को एउटा घटना पनि उल्लेख गर्न आवश्यक छ । १९ माघ २०६१ मातत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । म दमौलीमा गिरफ्तार भएँ । १० दिनपछि म छुटेँ । म काठमाडौँ आउँदासम्म शाही कदमको विरुद्ध कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको थिएन । सभापति र महामन्त्री नजरबन्दमा हुनुहुन्थ्यो । यो इतिहासको एउटा गलत कदम हो । यसका विरुद्धमा कांग्रेसले केही गरेन भने कांग्रेसले ठूलो मूल्य बेहोर्नुपर्दछ भन्दै पार्टीको सहमहामन्त्रीको हैसियतमा मैले बाहिर भएका साथीहरुसँग परामर्श शुरु गरेँ । केवी गुरुङ, बलबहादुर राई, बलदेव मजगैया, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दिलबहादुर घर्ती आदि केन्द्रीय सदस्यहरुसँग परामर्श भयो । अन्य दलहरुसँग सम्बन्ध राख्ने कामको जिम्मा केही साथीहरुलाई दिइयो । केवी गुरुङ पार्टीको निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष हुनाले उहाँलाई भूमिगत राखियो । मेरो आह्वानमा आन्दोलन गर्नुभन्दा नजरबन्दमा रहनुभएका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसद कोइरालाको नामबाट गर्न उचित हुने भएकाले उहाँकै हस्ताक्षरमा ७ फागुन २०६१ बाट शाही कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको आह्वान गरेर त्यसको जानकारी पछि कृष्णचन्द्र झमार्फत गिरिजाबाबु कहाँ दिइयो ।
कुनै परामर्श नगरी उहाँले किन गरेको भनेर भन्नु चाहिँ भएन । मुख्य सचिव शोभाकर पराजुलीले कार्यालय सञ्चालनको गोप्य व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । नजरबन्दबाट मुक्त भएलगतै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, “मैले नजरबन्दबाट नै आन्दोलन सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएका केही केन्द्रीय सदस्यहरु त आन्दोलन शुरु गर्नुभन्दा पनि आन्दोलनको विरोधमा पो देखिए ।” नामै किटेर भन्नुभएको ती व्यक्तिहरुका तत्कालीन क्रियाकलायहरु कुनै बेला अवश्य खुल्नेछन् । मलाई अहिले लाग्छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने उहाँलाई जानकारी नदिइ कन उहाँको हस्ताक्षर चलाएर शुरु गरिएको त्यो आन्दोलन असफल भएको भए मेरो चाहिँ के हविगत हुनेरहेछ । अनि पनि सतर्क रहन थालेँ । इतिहासबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने रहेछ । यी कुराहरु मैले सहभागी पात्रहरुको जीवनकालमा नै व्यक्त गर्न उचित ठानेँ र गरेँ ।
सत्ताको लोभले नेताहरुलाई अन्धो बनाउँछ । त्यसैले सत्तामा रहँदा सधैँ कार्यकर्ताको भीडभाड भइरहने नेताको जीवनको अन्तिम अवस्था कार्यकर्ताविहीन र पीडादायी हुने गर्छ । कार्यकर्ताले आफू प्रयोगमात्र भएको महसूस गरेको दिन उसले नेतालाई छोड्छ । विश्वासमा कार्यकर्ताले नेतालाई ज्यान दिन्छ, विश्वास गुम्दा नेतालाई फट्कारेको धुलो पनि दिँदैन । इतिहासले हामीलाई सिकाएको पाठ यहि हो ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ ।
साभार : हिमालखबर पत्रिका २०६६ पुस १६
चैत्र मसान्तसम्मलाई कृयाशिल वितरण र नविकरण स्थगन
राना बचाउ अभियानमा उठ्यो रु.६ लाख बढि सहयोग
तीनै जना मृत भेटिएपछि निर्मलबस्ती शोकमा डुब्यो
शुक्लागण्डकीमा लक डाउनले प्रत्यक्ष प्रभाव परेका ३१ सय परिवारलाई खाद्यन्नका सामाग्री
शनिबारको लक डाउन – सक्दो शेयर गर्नुहोस् ।